Xalayaa Afriikaarraa: Biyoonsee, Bashiriifi Big Biraazer bara 2019 keessa qalbii hawwachuuf deemu - BBC News Afaan Oromoo
Xalayaa Afriikaarraa: Biyoonsee, Bashiriifi Big Biraazer bara 2019 keessa qalbii hawwachuuf deemu
Goodayyaa suuraa Biyoonseen ga'ee lioness Nalaan The Lion King keessatti Disney deebisanii cimsuu keessatti qabdu akka dhaga'amu taasisuuf
Xalayaa walitti aansuudhaan gaazexessitoota Afrikaa irraa dhiyaataniin, leenjisaan miidiyaafi komunikeeshinii Jooseef waruunguu bara 2019 keessa maaltu ni ta'a jedhamee akka eegu barreesseera.
Waggaa darbe keessa kubbaa miilaa tilmaamuun walitti aansuudhan ergan mo'amee as, aduun Afrikaa irraan baatee Afrikaama irratti akka lixxu qofa malee bara 2019 keessa waan ni ta'a jedhee tilmaamu irratti ofitti amanamummaa guddaa hin qabu.
Garuu bara dhufu kan Afriikaa keessatti ni ta'a jedhee ani shakii tokko malee amanu jira. Isaan keessaas Afriikaan bara 2019 kana keeessa gara caalu 'beast, the ballot fi Big Brother'.
Agarsiifni TV (reality TV show) baayyee beekamaa kan akka Afrikaa ilaallatutti qophaa'u kan waggoota 16 dura Afriikaa Kibbaatti jalqabame, bara 2019 kana keessa Sierra Leone keessatti banamuudhaaf jira.
Agarsiisa guddaa ta'a jedhamees abdatamaa jira. Hanga ammaatti Big Biraazer Sierra Leone kanaaf iyati 2,000 gurgurameera.
Milkaa'ina agarsiisa TV (reality TV show) Big Siisteer kan bara darbe argametti aanee gatii guddaa hanga dolaara 12, 000 baasuudhaan akkasumas carraa hedduu beekamaa ta'uu akka qabuun magaalaa biyyattii keessatti agarsiisa TV (reality TV show) hunda caala amilkaa'u ta'a jedhamaa jira.
Waancaa Kubbaa Miilaa Afriikaa
Ji'a Guraandhalaa irraa jalqabee lammileen Sierra Leonean TV daawwatan torban ja'a walitti aansuudhaan eessa deeman ykn maal hojjenna osoo hin jedhiin karaa foddaa TV dhiirotafi dubartoota daawwachuutti goguuf jiru.
Yeroo daawwatan kanatti warri Sierra Leoneans kan isaan argachuu hin dandeenye taphattoota miilaa garee biyya isaanii ta'an namoota 11 shaampiyoonaa kubbaa miilaa afriikaa taana jedhanii falman arguudha.
Goodayyaa suuraa Gareen kubbaa miilaa Keeniyaa biyyaalessaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2019 kana irratti dandeettii cimaa akka agarsiisan abdiin eegaa jiru
Jaarmiyaan kubbaa miilaa gaggeessu, FIFAn sababii biyyattiin dhimma waldaa kubbaa miilaa biyyalessaa keessa harka seenfateera jedhuun akka waancaa Afrikaa kana bara 2019 kana irratti hin hirmaanne dhorkeera.
Garee F kana kessaa Sierra Leone ari'amuun biyoota Gaanaafi Keeniyaadhaaf carraa gaariidha.
yeroo jalqabatiif, sagantaan dorgommmii Waancaa Kubbaa Miilaa afriikaa kun Amajjiifi Guraandhala irraa gara Waxabajjiifi Adoolessaatti jijjiirama. gareen keessatti hirmaatanis 16 irraa gara 24tti guddata.
Gaggeessaa Sudaan irratti dhiibbaan cimaa jira
Ani qarshii kanan walitti qabachaa jiru garee kubbaa miilaa waggaa 15 booda darbuu danda'eefidha.
Gareen kun Keeniyaadha. Biyyi Afriikaa Bahaa kun kanaan dura namoota fiigichaan beekaman hedduu omishuun beekamti. Kanaaf, dorgommii Waancaa Afrikaa bara kanaa keessatti garee kubbaa miilaa Keeniyaa, Harraambeetti dubbiin cimuu dandeessi.
Sudaan keessatti dubbii cimaa kan ta'e dhimmaa daabboodha.
Xalayaan hayyoonni Oromoo Dr Abiyyiif barreessan maal jedha?
Gatiin daabboo torban lamaan dura paawondii Sudaan 2 irraa gara 3 ol guddachuun magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum dabalatee magaalota biroo keessatti mormii kaaseera.
Mormiin gatiin daabboo dabaluu mormuutiin jalqabe kun gara Pirezedaanti Omaar al-Bashiir aangoo isaanii gadi dhiisan gaafachuu irra ga'eera.
Naajeeriyaafi Afriikaa Kibbaa keessatti Filannoon Guddaan ni eegama
Paartiin biyya bulchu garuu karoora biroo qaba, kan Sudaan keessaa jechuudha. karoorichi kunis filannoo bara 2020 dhufuu jiru irratti hirmaachuu danda'uudhaaf akka heerri mootummaa jijjiiramu gaafachuudha.
Heerri mootummaa amma jiru Obbo Bashiir, namni bara 1989 fonqochaan aangoo irra ba'an kun, akka irra deebiyanii hin filatamne ni dhowwa.
Egereen Obbo Bashir dubbii isyaasaa Sudaan keessa jiru akka ho'u taasisaa jira.
Goodayyaa suuraa Mormii Atbaraa keessa ture kan gaafa Sadaasa 20
Naajeeriyaa ilaalchisee, waanti nuti amma beeknu, biyyaa guddichi Afriikaa kun namicha Sudaan irraa dhufe jedhameen hin bultu.
Ji'a kana gara jalqabaa, oduu qeeqxonni Pirezedaanti uhaammaduu Buhaarii du'aniiru kan biyya bulchaa jirus nama isa fakkaatu tokkotu Sudaaniirraa dhufeeti jedhamee ture.
Pirezedaantichi garuu ani lubbuun jira, anumatus biyya bulchaa jira jedhanii deebii kennaniiru.
Ani Buhaarii isuma dhugaadha, lammileen Naajeeriyaas filannoo Guraandhalaa deemsifamuuf jiru irratti akka sagalee naaf kennanii na filatan nan gaafadha jedhan.
Raayyaan ittisaa daangaa Zaalaambassaarraa akka turuuf waliigalameera
Obbo Buhaariin Pirezedaantota Afriikaa warra filannoowwan bara 2019 gaggeeffamuuf jiran irratti dorgomuuf qophaa'an keessaa tokkodha.
Afriikaa Kibbaa keesatti, Cyril Ramaphosa, namni sababii malaammaltummaan irratti ka'uun aangoo kan gadi dhiisan Jaakoob Zumaa irraa kan dhaalan, paartii biyya bulchaa jiru Kongirasii Biyaalessa Afrikaa (ANC) bakka bu'uudhaan dorgomuun turtii isaa dheerefachuuf dorgoma.
'Ekeraa sodaachuun hin jiru'
Namoonni muraasni ANC mo'amuu mala jedhanii kan eegan ta'us garuu, dorgommichi salphaa hin ta'u jedhama. Sababiin isaas maqaan paartii isaanii malaammaltummaan, hoji-dhabuu baayye baballateen akkasumas haaromsa dhimma abbummaa lafaa boodatti harkifateen hammeeffameera. Dhimmoonni kunneen ammoo qabxii dorgommii filannichaati.
ANCn heera mootummaa ittiin dhimma lafaa haaromsuun beenyaa malee warra adii jalaa fuudhee sirreessu akka baasuuf jiru waadaa galeera. Garuu mormitoonni kan dura dhaabbachuudhaaf akka jiran karoora baafataa jiru.
Maalaawwii keessattis PirezedaantiPeter Mutharika gama biraatiin dorgommii cimaatu isaan eeggata. Ibsaan addaan ciccituun, hir'ina qorichaafi malaammaltummaan walqabatee rakkoon jiru namoonni akka nuufan beekamaadha.
Pirezedaantii isa amma jiru kana dura kan turan Ekeraan akka isa rakkiste dubbatu. Ekeraa jedhame kanas balleessuudhaaf jechas luboota waamuun afuura xuraa'aa ekeraa itti waaman akka ariyanis taasisera jedhama.
Ekeraa Mutharikan sodaatan yoo jiraate garuu dorgommii filannoo bara 2019 kanaa qofadha.
Disney amma mallattoo daldalaan dhufaa jira
Biyyoota akka Zaambiyaafi Keeniyaa keessatti qeeqxonni yaaddoon liqaan Chaayinaan irraa argamu yaaddoo guddaa ta'aa jira..
Namoonni gariin ammoo jaalalli Afriikaafi Chaayinaa gidduu jiru gaddaan xumuramuu danda'a jedhanii yaaddoo qabu.
Goodayyaa suuraa Pirezedaanti Buhaarii
Kun osoo kanaan jiruu Ayyaanni Kabaja Fiilmii Afrikaa Fespaco baruma kana Guraandhala keessa Burkinaa Faasootti gaggeeffama.
Qophiin kun ogeessota fiilmii Afrikaa keessa jiran kumaatamaan lakkaa'aman walitti qabuudhaaf waltajii gaariidha jedhamus, iftoominni ulaagaa filannoo iftooma hin qabu jedhamaa jira.
kana malees, fiilmota keessatti jechi 'beast' in the jugle jedhamu Simba jedhamee beekama.
Addunyaan The Lin King irra deebiin hojjetamuu eeggachaa jira.
Barri 2019 bara gammachii isiniif yaa ta'u!
Viidiyoo Taateewwan gurguddoo shanan bara 2018